प्रथम तिनाउ नकआउट क्रिकेट कप टि–२० प्रतियोगिता, आयोजक तिनाउलाई उपाधि
क्रिकेट खेलको विकास र नया खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित बुटवलमा सम्पन्न प्रथम तिनाउ नकआउट क्रिकेट कप टि–२० प्रतियोगिता २०७५ को उपाधि आयोजक तिनाउ क्रिकेट क्लबले हात पारेको छ । बुधबा...
क्रिकेट खेलको विकास र नया खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित बुटवलमा सम्पन्न प्रथम तिनाउ नकआउट क्रिकेट कप टि–२० प्रतियोगिता २०७५ को उपाधि आयोजक तिनाउ क्रिकेट क्लबले हात पारेको छ । बुधबार भएको फाईनल खेलमा तिनाउले गोलपार्क क्रिकेट क्लबमाथि ७ विकेटको जित निकाल्दै उपाधि हात पारेको हो । उपाधिसंगै उसले नगद २५ हजार ५ सय ५५, ट्रफी, मेडल, प्रमाणपत्रबाट पुरस्कृत भएको छ । यसैगरि उपविजेतामा चित्त बुझाएको गोलपार्कले नगद १४ हजार ५ सय ५५सहित ट्रफी, मेडल, प्रमाणपत्रबाट पुरस्कृ...
वहुउद्येश्यीय हल निमार्णमा बिबाद
बुटवल तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं ६ मा निर्माण थालिएको वहुउदेश्यीय हलको काम राजनीतिक विवादका कारण रोकिएको छ । नगरपालिकाको बोर्ड बैठकले निमार्णका लागि दुई पटकसम्म...
बुटवल तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं ६ मा निर्माण थालिएको वहुउदेश्यीय हलको काम राजनीतिक विवादका कारण रोकिएको छ । नगरपालिकाको बोर्ड बैठकले निमार्णका लागि दुई पटकसम्म निणर्य गरीसकेपछि स्थानिय राजनीतिक दलका नेताहरुले वडा कार्यालयलाई पार्किङ्ग अभाव हुने भन्दै काम रोकेको हो । वडा नं. ६ को वार्ड कार्यालयको उत्तरतर्फ दुर्गा मन्दिर र हुलाक घरले चर्चेको करीब ५ कठ्ठा क्षेत्रफलमा अत्याधुनिक बहुउद्येश्यीय हल निमार्णको लागि योजना बनाएर कागजी काम पुरा भै...
बुटवल, १७ असार/ नेपाल एथलेटिक्स संघ जिल्ला कार्य समितिको शनिबार भएको तेस्रो अधिवेसनबाट लालहरि पाण्डेको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय नया कार्यसमिति गठन भएको छ । जसको प्रथम उपा...
बुटवल, १७ असार/ नेपाल एथलेटिक्स संघ जिल्ला कार्य समितिको शनिबार भएको तेस्रो अधिवेसनबाट लालहरि पाण्डेको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय नया कार्यसमिति गठन भएको छ । जसको प्रथम उपाध्यक्ष राजकुमार गुरुङ्ग, द्धितिय उपाध्यक्ष तुल बहादुर थापा, सचिव रामू पाण्डे, कोषाध्यक्ष साहबानु पठान, सदस्यहरुमा मोहन घले, दुर्गा बिक, सनम गुरुङ, नैना गुरुङ्ग, अमृत काफले, अर्जुन राज उपाध्याय सर्वसम्मत चयन भएका छन । समितिले मोहन घलेलाई केन्द्रिय प्रतिनिधि चयन समेत गरेको छ ।
प्रविधिले बढायो पेनाल्टी, पेनाल्टीमा रोनाल्डो र मेस्सीकै चर्चा
एजेन्सी । रसियामा जारी विश्वकप फुटबलमा समुह चरणका खेल भइरहेका छन् । समुह चरणका खेल भइरहँदा विभिन्न टिमले पाएको पेनाल्टीको चर्चा भइरहेको छ । हुनपनि रसिया विश्वकपमा पेनाल्टीको सदुपयोग गर्न स...
एजेन्सी । रसियामा जारी विश्वकप फुटबलमा समुह चरणका खेल भइरहेका छन् । समुह चरणका खेल भइरहँदा विभिन्न टिमले पाएको पेनाल्टीको चर्चा भइरहेको छ । हुनपनि रसिया विश्वकपमा पेनाल्टीको सदुपयोग गर्न सक्ने खेलाडी क्रिष्टियानो रोनाल्डो र पेनाल्टी मिस गर्ने खेलाडीमा लियोनल मेस्सीको नाम चर्चामा रह्यो ।
क्रिष्टियानो रोनाल्डो र लियोनल मेस्सी गएको हप्ता मेस्सी पेनाल्टी गोलमा चुकेपछि उनीहरुबीच को महान रु भन्ने सम्मका चर्चा चले । रोनाल्डोले स्पेनवि...
कोलम्बियासँग पराजित हुदै पोल्यान्ड विश्वकपबाट बाहिरियो
एजेन्सी । रसियामा जारी विश्वकप फुटबलअन्तर्गत समूह ‘एच’ को खेलमा कोलम्बियासँग ३–० गोलले पराजित भएसँगै पोल्यान्ड विश्वकप फुटबलको समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ । पोल्यान्ड लगातार दुई खेलमा पराजित भ...
एजेन्सी । रसियामा जारी विश्वकप फुटबलअन्तर्गत समूह ‘एच’ को खेलमा कोलम्बियासँग ३–० गोलले पराजित भएसँगै पोल्यान्ड विश्वकप फुटबलको समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ । पोल्यान्ड लगातार दुई खेलमा पराजित भएसँगै विश्वकप फुटबलको समूह चरणदेखि नै बाहिरिएको हो ।
खेलको ४० औं मिनेटमा यरी मिनाले गोल गर्दै कोलम्बियालाई अग्रता दिलाएका थिए । १–० गोलले पहिलो हाफसम्म पछि रहेको पोल्यान्डले दोस्रो हाफमा भने थप २ गोल खान पुग्यो ।
लुकाकुको जीवन कथाः बुबाको पुरानो जुत्ता लगाएर ७६ गोल
फ्रिजको अगाडि उभिनुभएकी मेरी आमा र उहाँको त्यो अनुहार, जुन दिन हामी नराम्ररी टुटेका थियौं, त्यो दिन मलाई अहिलेसम्म राम्ररी याद छ । म ६ वर्षको थिएँ । स्कूलमा हाफ छुट्टी भएका बेला खाजा खान घर गएको थिएँ । मेरो आम...
फ्रिजको अगाडि उभिनुभएकी मेरी आमा र उहाँको त्यो अनुहार, जुन दिन हामी नराम्ररी टुटेका थियौं, त्यो दिन मलाई अहिलेसम्म राम्ररी याद छ ।
म ६ वर्षको थिएँ । स्कूलमा हाफ छुट्टी भएका बेला खाजा खान घर गएको थिएँ । मेरो आमाले हरेक दिन दिने खाजा उही हो, दुध र पाउरोटी । सानो हुँदा त्यो बाहेक अरु हामी सोच्दा पनि सोच्दैन थियौं । अहिले सम्झँदा लाग्छ, हामीले सक्ने नै त्यही थियो ।
त्यो दिन म घर आएर सिधै भान्सामा गएँ । आमा फ्रिजको अगाडि दुधको बट्टा लिएर बसिरहनुभएको थियो । सधैँ नै उस्तै हो । तर, त्...
६ असार, काठमाडौं । ब्राजिलियन स्टार फवार्ड नेइमार खुट्टाको चोट फेरि बल्भिmएको छ, जसका कारण उनले अभ्यास गर्न सकेनन् । मंगलबार अभ्यासका क्रममा पुरानै चोट...
६ असार, काठमाडौं । ब्राजिलियन स्टार फवार्ड नेइमार खुट्टाको चोट फेरि बल्भिmएको छ, जसका कारण उनले अभ्यास गर्न सकेनन् ।
मंगलबार अभ्यासका क्रममा पुरानै चोट बल्झिएपछि नेइमार फिजियोथेरापिस्टसँग गएका छन् । उनी त्यहाँबाट छिट्टै अभ्यासमा फर्कन टिमको विश्वास छ ।
पेरिस सेन्ट जर्मेनबाट खेल्ने क्रममा चोट लागेपछि उनको दायाँ खुट्टाको शल्यक्रिया गरिएको थियो । सिजनको अन्तिम खेलहरु गुमाएका उनी विश्वकप अघि मैद...
नेपालसँग खेल्ने एमसीसीको कप्तानी जयवर्द्धनेले गर्ने
६ असार, काठमाडौं । नेपालसँग मैत्रीपूर्ण क्रिकेट खेल खेल्ने बेलायतको चर्चित क्लब मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) को नेतृत्व श्रीलंकाका पूर्वकप्तान माहेला जयवर्द्धनेले गर्ने भएका छन् ।...
६ असार, काठमाडौं । नेपालसँग मैत्रीपूर्ण क्रिकेट खेल खेल्ने बेलायतको चर्चित क्लब मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) को नेतृत्व श्रीलंकाका पूर्वकप्तान माहेला जयवर्द्धनेले गर्ने भएका छन् ।
एमसीसीले नेपाल र नेदरल्याण्ड्ससँग हुने टी ट्वान्टी क्रिकेटका लागि बु्धबार कप्तान चयन गरेको हो ।
उक्त खेल लड्समा जुलाइ २९ गते हुनेछ । श्रीलंकाका उत्कृष्ट खेलाडी जयवर्द्धने क्रिकेटको वान डे, टेस्ट र टी ट्वान्टी फर...
७ असार, काठमाडौं । विश्वकप फुटबलअन्तर्गत बिहीबार बिहान सम्पन्न खेलमा स्पेनले इरानलाई १-० ले हराएको छ । स्पेनको जितमा डियगो कोस्टाले ५४ औं मिनेटमा गोल गरे ।
त्यसको करिब १० मिनेटपछि इरानले स्पेनको पोष्टमा बल छिराए पनि त्यसले गोलको मान्यता पाएन । इरानका सेइद इजाटोलहीले हेडमार्फत बललाई जाली चुमाएका थिए । तर, रेफ्रीले त्यसलाई अफसाइड दिए ।
गोल गरेको भनेर सेइद र इरानका समर्थकहरुले गरेको सेलिब्रेसन...
पाल्पामा ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता
पाल्पा, असार – जिल्ला ब्याडमिन्टन संघ , पाल्पाद्वारा आयोजित तथा तानसेन नगरपालिका वडा नं. ४ द्वारा प्रयोजित मा.वि स्तरिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता तथा मेन्स...
पाल्पा, असार – जिल्ला ब्याडमिन्टन संघ , पाल्पाद्वारा आयोजित तथा तानसेन नगरपालिका वडा नं. ४ द्वारा प्रयोजित मा.वि स्तरिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता तथा मेन्स जिल्ला स्तरिय खुल्ला डबल ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ ।
उक्त्त प्रतियोगितामा १५ मा.वि विद्यालयहरुका छात्र ५२ र छात्रा ५० गरि १०२ जना र मेन्स डवलमा ४२ जना खेलाडीहरुको सहभागी रहेको थियो । उक्त्त प्रतियोगिता जेष्ठ ३० देखि अषाढ ३ गते सम्म संचालन भएको थियो उक्त प्रतियो...